जिव्रो | EduKhabar
Tilak Kunwar शिक्षकले रहरले होइन बाध्यताले दलगत राजनीति गरिरहेका छन् । शिक्षक मुक्त राजनिति दल बनाउने आँट कसै सित छैन, तसर्थ निर्वाचन आयोगको वकवक निरथक प्रयास हो । यो स्तम्भ सामाजिक सञ्जालमा व्य...
Milan Pandey शिक्षकलाई म्याथको सर, साइन्सको म्याम, नेपालीको सर भनेको सुहाउँछ। काँग्रेसको मिस, एमालेको सर, माओवादीको सर भनेको सुहाउँदैन। अझ,शिक्षकले नयाँ नयाँ पुस्तक च्यापेर हिँडेको सुहाउँछ, राता रा...
Deepesh Bhandari यो त देखाउने दाँत मात्र हो । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले निकालेको पुल दरबन्दी कहाँ गयो ? एक जिल्लामा सयौँ दरबन्दी पुलमा थियो कता हरायो ? दरबन्दी थप हुने जिल्लामा कहाँबाट...
Subhab Thapa शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा ९ एउटा विद्यालयमा पढेर उत्तीर्ण भएको र रजिष्ट्रेशन त्यहीँ भएको विद्यार्थी शैक्षिक सत्र २०७७ मा अर्को विद्यालयमा कक्षा १० अध्ययन गर्न तथा १० पढेकै विद्याल...
Shiva Ram Bohaju स्वयंसेवक शिक्षक सम्वन्धमा देशका कुना कन्दरा, गाउँ, ठाउँ जहाँ स्थायी, अस्थायी शिक्षक जान मानेका छैननु र जान सकेका छैनन् । शिक्षक अभाव भएका यस्ता दुर्गम ठाउँमा गएर देशम...
Laxman Sharma सार्वजनिक विद्यालयको भवन,जग्गा,भौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यो कुनै पनि तहको सरकारको सम्पत्ति हैन। कुनै समयको प्र अ वा वि.व्य.स. वा सरकारले कुनै पनि कारण देखाएर सार्वजन...
एउटा विद्यार्थी प्रधानाध्यापसँग - सर सर ! हिजो बुबाले मेरो जन्म दिनमा दिनु भएको महँगो घडी हरायो । प्रधानाध्यापक : कहाँबाट हरायौ विद्यार्थी : यहीँ कक्षा कोठाबाट हरायो सर ! प्र...
Ghanashyam Khadka सरकार पहिले स्कूलबाट नैतिक शिक्षा हटाउँछ अनि अनैतिक गीत गाइस् भनेर नैतिक शिक्षा पढ्नबाट वन्चित किशोर गायकलाइ पक्रन्छ ! - परिवारसँग बसेर उनले गाएका गीत हेर्न सुन्न नसकिने भन...
Krishna Thapa Kbt नेपालमा आधारभुत तह सम्म नि:शुल्क शिक्षा संविधानमा घोषणा भएको छ तर १) पहिला पुस्तक नि:शुल्क पाइन्थ्यो अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकको न्युनतम मुल्य १२०० २) पहिला पढे...
Guru Mainali लगानी बिना प्रतिफल खोज्ने लठुवाहरुको देश हो यो। शिक्षामा पनि बिना लगानी प्रतिफल खौजिदैछ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षक छनोट गर एकै वर्षमा परिणाम देखिन्छ।
Govind Raj Pokharel उच्च शिक्षाको लागि विदेश पढ्न जाने नेपाली विधार्थीहरुले यस वर्ष करिव करिव ३८ अर्व विदेश लगेका रहेछन्। हामीले नीजि क्षेत्रलाई पनि सहकार्य गर्ने गरि त्यस्ता विषयमा कोर्सहरु सं...
Bishnu Raj Upreti यो शिक्षा मन्त्रालय किन खाली विवादित काम मात्र गर्छ ? स्थायी शिक्षकको परिक्षाको रिजल्ट नगरी करारमा नियुक्ति गर्ने रे, विगतका गल्तिबाट किन नसिकेको होला, उल्टोबाटो हिँडी लक्ष्...
Durga Lamichhane Maapremrupa २ एकान २, २ दुना ४ २ मा २ जोडे ४, ४ मा २ घटाए २ ६ लाई २ ले भाग गर्दा ३, बाँकी नि:शेष ५ लाई २ ले भाग गर्दा २, बाँकी १ शेष यही होइन त सर तपाईँले मलाई पढ...
Tara Prasad Oli स्थायी शिक्षकलाई पुनर्योग्यता परीक्षा लिएर ६० अंक नल्याए अवकाश दिने प्रस्ताव आएछ, ल म त्यसको लागि व्यक्तिगत रुपमा तयार छु । लौ त्यसो भए यसो गरौं – मुख्य सचिव देख...
Mana Prasad Wagley १. गएको ३ दशकमा १७ खर्ब खर्च गर्दा पनि सार्वजनिक शिक्षामा यसै साल मात्र १२ लाख विद्यार्थी घटे । शिक्षा मन्त्रालयको यो अक्षमता राखिराख्नु देश र जनताको हितमा छैन । त्यसैले शिक्...
दुई दिन बिदा : शैक्षिक क्षेत्रको मोडालिटिबारे निर्णय
दुई दिन बिदा : निजी विद्यालयका दुई संगठनको फरक राय
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमति 'मनलाग्दी' !
पालिका चुनावका सङ्घारमा शिक्षाको कुरो
समयमा कानून समेत नबनाउनेका ठूला ठूला घोषणा !
चुनावका तीन दिन वैकल्पिक पद्दतीबाट पठनपाठन
Kushal Dev Ghimire
ज्यादै मननीय लेख....वस्तुनिष्ट विष्लेषण.....
hari lal nepali
शिक्षा बिभागलाइ खारेज कहिले गरियो ? कृपया जबाफ पाउ। धन्यवाद ..
जतिसक्दो चाडै संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ ।साबिक उ मा बी , राहत अस्थाइ करार लगायतका शिक्षकहरु उमेर हद नाघेको..